Soomaali (somaliska) | Kronofogden
Adigaaga deymanka qaba ama doonaya in lacagtaadi laguu soo celiyo waxaad naga heli kartaa taageero
Ku soo dhawaw Kronofogden. Waxaan nahay hey’ad dowladeed oo deymanka ka shaqeysa. Ma laguugu leeyahay deyman aadan dhiibi karin amase ma dooneysaa in aad caawimaad u heshid sidii lacagtaadi laguugu soo celin lahaa? Markaas meel sax ah ayaad timiday.
Cidna lama safaneyno. Waxay taasi ka dhigantahay in aan taageero ku siineyno adigaaga deynka qaba oo iska dhiibaya, waxaanna hubineynaa in aad si sax ah wax isaga dhiibtid. Laakiin waxaan xitaa ka shaqeynaa in adigaaga xaqa u leh in lacagtaadi laguu soo celiyo, aad lacagtaadi u heshid sida ugu dhakhsi badan ee suurta gal ah.
Halkan waxaad ka heleysaa macluumaad ku aaddan sida aan sida ugu fiican kuugu taageeri karno, waxa ay tahay in aad ka fikirtid marka aad dooneysid in aad heshid caawimaaddeenna, waxa ay warqadda laguu soo diray ka dhigantahay iyo sida aad noola soo xiriiri kartid.
Haddii laguugu leeyahay deyn aadan bixin karin, cidda lacagta kugu lehna ay caawimaad naga dooneyso, waan kula soo xiriireynaa. Waxaad naga ...
Warqadda kale ee caadiga ah ee aad naga heli kartid waxaa la dhahaa "Skuld att betala"
Marka aad deynkaaga bixineysid waxaan hubineynaa in lacag dhiibiddu ay si huban u dhaceyso.
Haddii aadan deyn iska bixin waxaa lagu saari karaa calaamad ah in aadan lacagaha iska bixin – ama waa lagu calaameynayaa sida badanaa loogu...
Deymankaaga annaga agteenna waa laga dhigi karaa kuwo qarsoodi ah. Xitaa kiisas kale oo noo kaa agyaal wey khuseyn kartaa taasi, tusaale aha...
Adigaaga uu deynku kula degay, micnaha ay kugu jiraan deyman aadan abidkaa bixin karin, waa lagaa cafin karaa deymanka. Laakin waxaa shardi ...
Ma jirtaa cid deyn kaa qabta oo aan lacagta kuu soo celineyn? Haddii aad xaq u leedihid in lacagtaadi laguu soo celiyo, waxaad taageero ka h...
Wax deyman ah laguuguma laha miyaa, laakin saas oo ay tahay waxaad welwel ka qabtaa dhaqaalahaaga? Waxaan ku siineynaa taageero iyo hagitaan...
Marka laga hadlayo shirkad ay ku adagtahay in ay iska bixiso faatuurooyinkeeda, waxaa jira jidad kala duwan oo la maro si xal loo helo. Mara...
Kronofogden waa hey’ad dowladeed oo deymanka ka shaqeysa. Waxaan nahay ku dhawaad 2 300 oo shaqaale, waxaanna waddanka ka kala joognaa 32 me...
Shaqadeenna waxaa xukuma qiyamka aasaasiga ah ee khuseeya dhammaan dadka xukuumadda u shaqeeya iyo qiyam aasaasi ah oo annaga noo gaar ah.
Waxaan leennahay hawl cad nooloo diray. Waxaan caawineynaa cidda aan lacagteedi la siin, waxaanna taageero iyo talooyin siineynaa cidda laca...